သင်၏အကြောင်းအရာကိုအသုံးပြုရန်သော့ချက်သုံးချက် | Martech Zone
များစွာသောစျေးကွက်သမားများသည်သူတို့နှစ်သက်သောသို့မဟုတ်အခြားသက်ဆိုင်သောအရာများနှင့်အခြားသူများကိုလျစ်လျူရှုသောနည်းပညာတစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။ ငါဟာအလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ပါဝင်ပတ်သက်သူဖြစ်ပြီးစျေးကွက်သမားကသူတို့ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းများကိုမည်သည့်နည်း၊ ပုံစံ၊ ပုံစံမျိုးမဆိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏ဘလော့ဂ်များမှတစ်ဆင့်အကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုသောကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အကြောင်းအရာသည်သင်၏ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်စေရန်သော့သုံးချက်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်
သက်ဆိုင်ရာနေပါ - မည်သည့်စုံစမ်းနှောင့်ယှက်မှုပင်ထားပါစေဆက်လက်ထားရှိပါ။ သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာကောင်းများကိုအမြဲတမ်းပြောဆိုရန်သေချာအောင်ကြိုးစားပါ။ ၎င်းသည်သင်၏စာတိုပေးပို့ခြင်းနှင့်ကျော်ခြင်းသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြင်းတို့ထက်သင့်အားအခွင့်အာဏာနှင့်ခိုင်မြဲသောနာမည်ကောင်းရရှိလိမ့်မည်။
အမြဲတမ်းထုတ်ပြန်ပါ - သင်၏အကြောင်းအရာကိုလိုချင်သောအလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များရှိသော်လည်း၎င်းတို့တည်ရှိသည်ကိုမသိပါ။ ဆောင်းပါးများကိုအခြား ၀ န်ဆောင်မှုများသို့တင်ခြင်း၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ၊ လမ်းညွှန်စာအုပ်များတွင်လင့်ခ်များထားပါ၊ သက်ဆိုင်ရာဖိုရမ်များ၌စကားပြောဆိုမှုများကိုထည့်သွင်းပါ၊ သင်၏ဆောင်းပါးများကိုလူမှုရေးအမှတ်အသားပြုသည့်ကိရိယာများမှတစ်ဆင့်မြှင့်တင်ပါ၊ သတင်းဆိုက်များ၊ ဝီကီများသို့တင်သွင်းပါ။ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုရန်။ သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာများ၊ သင်၏အီးမေးလ်လက်မှတ်များ၊ သင်၏စီးပွားရေးကဒ်များကိုနေရာတိုင်းတွင်လိပ်စာများထည့်ပါ။
နေရာတိုင်း Syndicate - လူမှုမီဒီယာ application တိုင်းနီးပါးသည်သင်၏ RSS feed ကိုသူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အတွက်အင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ တစ်ခုတည်းကိုသုံးပါ! လူအများစုကကွန်ယက်တစ်ခုတည်းကိုအသုံးချပြီးဘယ်တော့မှလမ်းလွဲမသွားဘူး၊ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတို့ရှာဖွေချင်တဲ့နေရာမှာသေချာစေပါ။ Twitter သို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါလွန်း!
ဗွီဒီယို - တွစ်တာမှာသင့်ဘလော့ဂ်ကိုဘယ်လိုတင်ရမလဲ
25:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 26 တွင်
သင်၏ထိပ်ဆုံးကျည်ဆံ - ဆီလျော်မှုသည်သော့ချက်ဖြစ်သည်
- မဟာဗျူဟာ၊ နေရာချထားမှု၊ ဆက်စပ်မှုနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများကိုဆွေးနွေးသောလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်သမားများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပါ
- ထိပ်တန်းသြဇာလွှမ်းမိုးသူများ (Brogan, Owyang …) ထုတ်ဝေသောအရာအားလုံးကိုဖတ်ပါ။
- မှော်အတတ်ပညာနှင့်ထိတွေ့ပါ (သိသာထင်ရှားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပြီးခေါင်းစဉ်အပေါ်ကောင်းစွာတတ်ကျွမ်းသူများ) ။